Waxaa loo saxeexay 'Qorshaha Ficilka ee Ankara' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara'Qorshaha Waxqabadka Ankara ee' Ankara Noise 'Protocol Saxiixan
22 / 10 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Asphalt News, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY
ankara gurultu tallaabada qorshaha borotokoolka la saxiixay
Borotokool ayaa loo saxeexay “Qorshaha Waxqabadka ee Ankara” kaas oo lagu xaqiijin doono isku-duwidda Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara iyo Xarunta Cilmi-baarista ee TÜBİTAK.
Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Ankara Dr. Cumali Kınacı iyo TÜBİTAK Xarunta Cilmi baarista ee Xarunta Tamarta Deegaanka iyo Nadiifinta Selma Ayaz waxay saxiixeen borotokool iyada oo iskaashi nabdoon oo xasilooni ku dheehan tahay loo sameyn doono caasimada.
Qorshaha ficilka ee loo yaqaan "Noise Action Plan" Eylem wuxuu u diyaar garoobay inuu hagaajiyo tayada nolosha muwaadiniinta ku nool Ankara iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka caafimaad ee laxiriira caafimaadka, waxaa baari doona khubarada goobta.
Khariidadda Istiraatiijiyadeed ee loo yaqaan "Strategic Noise Map") waxay xisaabta ku darsan doontaa cilmi baaris faahfaahsan oo ku saabsan wadada, tareenka iyo ilaha warshadaha muddo labo sano ah si loo xakameeyo loona yareeyo dhawaqa si xun u saameeya caafimaadka aadanaha iyo tayada nolosha.
QIIMAYNTA LACAG LA'AAN
Iyadoo borotokoolka lagu saxiixay Xarunta Cilmi baarista ee TUBITAK Marmara, duruufaha yareynta qeylada ayaa laga hirgalin doonaa Ankara, Xoghayaha Guud ee Dowladaha Hoose iyo Agaasimaha Guud ee ASKI. Dr. Cumali Kınacı wuxuu bixiyay macluumaadka soosocda: unda Natiijadan daraasaddan, waxay cadeyn doontaa waxa sawaxanka buuqa uu yahay iyo meesha ay ku yaalliin Ankara. Intaa ka dib, waxa hay'adaha u baahan inay sameeyaan si loo yareeyo buuqa ayaa la go'aaminayaa. Tallaabooyinka la qaadayo si loo yareeyo dhawaaqa ayaa si cad loo ogaan doonaa. Daraasadani kaliya ma yareyn doonto ilaha dhawaaqa laakiin waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa qorshayaasha horumarka. Daraasadani waxay noqon doontaa talaabo muhiim ah oo gacan ka geysan doonta dib u eegista iyo diyaarinta qorshayaasha horumarineed ee cusub iyadoo la tixgelinayo sawaxanka.
Iyadoo la raacayo borotokoolka, Kınacı wuxuu tilmaamay in Ankara ay seegi doonto marxalad kale oo muhiim ah oo ku saabsan howlaha is waafajinta EU wuxuuna yiri, bu Mashruucan wuxuu sidoo kale fulin doonaa amarada buuqa ee EU-da. Gaar ahaan wasakhowga warshadaha iyo wasakhda xarumaha madadaalada waa la qaddarin doonaa. ”
Selma Ayaz, Agaasimaha T DirectorBİTAK Xarunta Cilmi baarista Deegaanka iyo Tamarta ee TMB, oo sheegtay inay fulin doonaan shaqo deg deg ah fulinta qorshayaasha ficil, ayaa yiri “Hadafkeenu waa inaan carqalad ka dhigno meelaha mudnaanta leh ee qorshaha Qorshe Hawleedka”.
Waxaa la weydiinayaa XARUNTA
Qorshaha Ficil ee Feejignaanta ”ee cabirista buuqa iyo baaxadda cabirrada laga sameyn doono aagagga Waaxda Caafimaadka ee Degmadda Ankara ee Magaaladda Seyfettin Aslan, waxay shacabku waydiin doonaan fikradaha sahaminta: Ankara, 'maskaxda guud' had iyo jeer waxay noqon doontaa asaaska. Wasakhowga buuqa ee Ankara waxaa lagu yareyn doonaa tillaabooyin ay ka mid yihiin yarayn aamusnaan ah, carqalad xagga buuqa ah iyo carqalada cagaaran. ”
Qorshaha Waxqabadka Ankara ee Sanadka
Khariidada Istaraatiijiyadda ee Ankara